မွငျရသူတိုငျး စိတျမကောငျးဖွဈရတဲ့ သားမိနှဈယောကျ V call ပွောနပေုံလေးကို တငျပေးလာတဲ့ ခမျြးခမျြး – XB Media & News
အဆိုတျော ခမျြးခမျြးကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတျဒိတျကြဲ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈပွီး ပရိသတျအားပေးမှု ကိုလညျး မြားစှာရရှိထားတဲ့သူဖွဈပါတယျ။ ဆယျစုနှဈတဈခုကွာ အနုပညာအလုပျတှကေို ကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့တဲ့ သူမက
အခဈြသီခငျြးတှသောမကပဲ အဆှေးသီခငျြးတှကေိုလညျးစိတျခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုလရှေိ့တဲ့သူတဈယောကျပါ။ အခုလိုအောငျမွငျမှု တှရေရှိခဲ့တဲ့ခမျြးခမျြးဟာ လကျရှိမှာဆိုရငျ ခငျပှနျးသညျရှိရာအီတလီမှာသှားရောကျနထေိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
ခမျြးခမျြးကတော့ မွနျမာပွညျမှာကနျြခဲ့တဲ့ သမီးကွီးကိုလညျး လှမျးနရေငျး သမီးငယျလေးအပျေါမှာလညျး အရမျးကိုခဈြပွီး အရိပျတကွညျ့ ကွညျ့နဲ့ ခဈြနတော ဖွဈပါတယျနျော..တဈခါတဈလမှောလညျး သမီးငယျလေးရဲံခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တှကေိုလညျးပရိသတျကွီးအတှကျ တငျပေးနကွေဖွဈပါတယျ. မကွာသေးခငျက ခမျြးခမျြးရဲ့ Facebook Story တှငျ ဓာတျပုံလေးတဈပုံ တငျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ သမီးလေးကို မတှရေ့တာကွာပွီဖွဈတာကွောငျ့ ဗီဒီယိုကောလျပွောရငျး ဝမျးနညျး
မကျြရညျတှေ ပါးပွငျပျေါသို့ စီးကလြာတဲ့ ပုံလေး ဖွဈပါတယျ။” သားအမိနှဈယောကျ သတိရလို့ ဖုနျးပွောရငျး ငိုကွ သမီးလေးရေ အမရေ့ငျတှေ ပူလိုကျတာ သတိရတဲ့စိတျက နတေို့ငျး ဟနျဆောငျပြျောအောငျ ဖုံးပမေယျ့ အဆငျမပွဘေူး အမွနျဆုံး ဆုံပါရစေ ” ဆို
ပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ Fans Myay Ni Lan ပရိသတျကွီးလညျး ခမျြးခမျြးတို့ သားအမိနှဈယောကျ အမွနျပွနျလညျ ဆုံဆညျးနိုငျစဖေို့ ဆုတောငျးပေးသှားကွပါဦးနျော။
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ြ ဖစ်ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု ကိုလည်း များစွာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ သူမက
အချစ်သီချင်းတွေသာမကပဲ အဆွေးသီချင်းတွေကိုလည်းစိတ်ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ အခုလိုအော င်မြင်မှု တွေရရှိခဲ့တဲ့ချမ်းချမ်းဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ရှိရာအီတလီမှာသွားရောက်နေထို င်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ချမ်းချမ်းကတော့ မြန်မာပြည်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သမီးကြီးကိုလည်း လွမ်းနေရင်း သမီးငယ်လေးအပေါ်မှာလည်း အ ရမ်းကိုချစ်ပြီး အရိပ်တကြည့် ကြည့်နဲ့ ချစ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..တစ်ခါတစ်လေမှာလည်း သမီးငယ်လေး ရဲံချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံလေးနဲ့ ဗီဒီယိုလေး
တွေကိုလည်းပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ပေးနေကြဖြစ်ပါတယ်. မကြာသေးခင်က ချမ်းချမ်းရဲ့ Facebook Story တွင် ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သမီးလေးကို မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့် ဗီဒီယိုကော လ်ပြောရင်း ဝမ်းနည်း
မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်သို့ စီးကျလာတဲ့ ပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။” သားအမိနှစ်ယောက် သတိရလို့ ဖုန်းပြောရင်း ငိုကြ သမီးလေးရေ အမေ့ရင်တွေ ပူလိုက်တာ သတိရတဲ့စိတ်က နေ့တိုင်း ဟန်ဆောင်ပျော်အောင် ဖုံးပေမယ့် အဆင်မပြေဘူး အမြန်ဆုံး ဆုံပါရစေ ” ဆို
ပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Fans Myay Ni Lan ပရိသတ်ကြီးလည်း ချမ်းချမ်းတို့ သားအမိနှစ်ယောက် အမြန်ပြန်လည် ဆုံဆည်းနိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းပေးသွားကြပါဦးနော်။